Estonia na-akpọ ndị njem nleta ka ha rie ụzọ ha site na mba ahụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » Estonia na-akpọ ndị njem nleta ka ha rie ụzọ ha site na mba ahụ
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Akụkọ gbasara Estonia • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Iji mee ememme nri ya na-ebili, gaa na Estonia amalitela maapụ 'Gastronomy Trail' iji kpọọ ndị ọbịa ka ha chọpụta ụfọdụ ụlọ nri kacha mma, ebe a na-ere kọfị, ụlọ ndị na-eme mmanya na ndị na-eme ihe ọ localụ localụ dị na mba ahụ.
Maapụ ahụ na-enye aka gosipụtara isi ebe ndị na-enye ahụmịhe nri kacha mma n'akụkụ ụzọ ise - nri dị mma, ụlọ nri ụlọ, nri ndị Estonia ọgbara ọhụrụ, ụlọ oriri na ọéụ ,ụ, ụlọ cider na ebe a na-eme biya - ma na-enyere ndị ọbịa aka ịhazi ụzọ nke ha.
A na-anabata ndị ọbịa ka ha rie nri site na mba ahụ.
Ọma iri nri
Estonia bụ ebe obibi maka nhọrọ nri dị elu nke akwadoro nke na-eme ka ọdịnala ọdịnala Estonia nke ọma na ọkụ ugbu a. Nọdụ ala n'ụsọ osimiri ọdọ mmiri Pühajärv na ndịda Estonia, GMP Pühajärve Club House & Restaurant na-ewu ewu gosipụtara ọtụtụ oge n'ime 'White Guide Nordic' a ma ama, ndepụta nke ụlọ nri kacha mma Nordic. N'ịbụ onye dị ka ụlọ oriri na ọ bestụ bestụ kacha mma na Tartu, Reslọ oriri na ọõụõụ Hõlm na-enye nchịkọta nhọrọ ụwa na ohere maka ndị ọbịa ịnụ ụtọ anwansi nri Lauri Ülenurm site na kichin ya na-emeghe. Na NOA, ihe isi nri Orm Oja na akụrụngwa enwetawo NOA ebe n'ime ''slọ oriri na ọ Theụ 50ụ kachasị mma nke ụwa XNUMX', ebe Art Priori mara maka ngwakọta nri na nke mbụ ya na nke mbụ.
Restaurantslọ nri ụlọ
Ndị Estonia bụ ndị ama ama na-eri nri ma na-emekarị kichin ha ka ọ bụrụ otu ụlọ oriri na ọ -ụ ,ụ mara mma. Ọ bụ ikpe na Anna na Erno, ndị nwe Anno Home Restaurant & Winery, ndị na-enye menu sitere na ihe ọhụrụ, mpaghara. MerMer, nke di na Kolga-Aabla n'obodo azu di egwu na Juminda peninsula, na-enye nri di egwu, na-adighi nma. Restaurantslọ oriri na ọ homeụ homeụ na-arụ ọrụ ugbo na-arịwanye elu, ya na Ööbiku Farm na-enye menu na-agbanwe agbanwe mgbe niile nke edoziri na ngwaahịa ọhịa oge, yana Tammuri Farm Restaurant na-enye nri na-edozighi nri dabere na ihe ndị ọhụrụ na ụlọ.
Nri Estonia nke oge a
E nwere ọgbọ ọhụụ nke ndị isi Estonia na-eduga ngbanwe mgbanwe nri site na ịgwakọta isi nri nke Scandinavia na uto ọdịnala iji tụlee efere ọhụụ na ọnụahịa dị mma. Ndị isi Estonia na-aga n'oké ọhịa maka mmụọ nsọ - ma ọ bụ ero ọhịa, Ome spruce, raịlị a kpụrụ akpụ, akwụkwọ ojii na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ cones green green. Ihe oriri Estonia nke oge a dị na Põhjaka Manor na mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke ägbè Järva, ebe a na-akwado nri dị ụtọ iji ihe ọ bụla ma ọ bụghị naanị mkpụrụ osisi. A maara nri dị mma na Nordic na Restaurant Ö, nke ndị isi Ranno Paukson na Martin Meikas duziri, bụ ndị na-esite n'ike mmụọ nsọ si n'àgwàetiti ha bụ Saaremaa - agwaetiti kachasị ukwuu na Estonia - iji mepụta nri dị mgbagwoju anya, nke a nụchara anụcha na ala na mmiri.
Estonia bụ ama ama maka ọtụtụ ebe a na-ere kọfị mara mma nke dị n'ọtụtụ ebe akụkọ ihe mere eme, ebe ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ mkpọtụ obodo ahụ ma nụ ụtọ nri ọdịnala mara mma. Cafe ọ bụla na Estonia nwere akụkọ pụrụ iche ọ ga-agwa.
Tallinn gothic Old Town na-adọrọ adọrọ na ụlọ oriri na ọ romanticụ romanticụ ịhụnanya ya na ọkachamara na chocolate na marzipan, ebe ndị ọbịa nwere ike ịlaghachi na 1930s ọla edo site na ịga na Café Dietrich na Haapsalu, obodo mara mma nke osimiri dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ. Mahedik Café bụ ebe mbụ na Pärnu iji kwado nri nri na, n'ime afọ 120 gara aga, Tartu's Werner Café anabatala ndị egwu ama ama, ndị omenkà, ndị na-eme ihe nkiri na ndị edemede, na-enweta nọmba 1 maka kọfị kachasị mma na Tartu.
Clọ ndị na-eri nri na ebe obibi biya
Estonia nwere ọdịnala na-adịgide adịgide nke biya biya na cider. Amụrụ na 2011, Põhjala ebe a na-eme biya ngwa ngwa ghọrọ otu n'ime ụlọ ọrụ biya kacha mkpa dị na Estonia. Speakeasy nke Põhjala mmanya na mpaghara Kalamaja nke nka Tallinn na-enye ndị ọbịa ohere ịnwale biya biya ya.
Na Tori Cider na Wine Farm apụl na mkpụrụ vaịn toro eto. A na-eji cider mee ya na usoro sitere na champeenu sitere na mmụọ nsọ, 'méthode traditionnelle', ebe a na-emepụta ihe ndị na-emepụta mmiri n'oge agba ụka na-enye aka na mkpụrụ osisi cider na ụtọ ọhụrụ. Parnu's Jaanihanso Cider House - ụlọ nke cider na ezinụlọ mkpụrụ osisi nke dị na ugbo nke narị afọ nke 18 - na-emepụta ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mma cider na mba ahụ.